ဗေဒင် – Media Sharing
သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်၊သင့်ချစ်သူ အကြောင်း….
သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်၊သင့်ချစ်သူ အကြောင်း…. သင်ဟာ… 1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်လိုပါပဲ …။ 2ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်
စနေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်(၆)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတန်း
ဤကာလအတွင်း ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေများဝင်တတ်သည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံမည်။ အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ လက်ဝတ်ရတနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ ဘုရာဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ ရွှေနှင့် အဖိုးတန်
သောကြာသားသမီးများ အတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်(၆)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတန်း
သောကြာသားသမီးများ အတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်(၆)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတန်း ဒီလ အတွင်း မှာ နှိင်ငံရပ်ခြားနဲ့ ပက်သက်ပြီးသွားရ ကိန်းရှိသည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်းများတမင်ရန်စ နှောက်ယှ က်တာ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ် တယ်။ သူတစ်ပါးပြဿနာဟာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အချိန်မျိုးပါပဲ။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် (၆)လပိုင်း တစ်လစာဟာစာတမ်း…
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် (၆)လပိုင်း တစ်လစာဟာစာတမ်း… ဒီကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်မပြေ နိုင်သေးပါ …။ ဟိုဟာလုပ် ရမလို ဒီဟာလုပ် ရမလိုလို နဲ့ အချိန်ကုန်နေမည် …။ လက်အောက် ငယ်သားများ ထံမှ အကူအညီ ရရှိလိမ့်မည် …။ လူမှု ဆက်ဆံရေးများ အနည်းငယ် လွဲချော်နေမည် …။
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း…
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း… ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဇွန်(၆)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ လူမျိုးကွဲ၊လူမျိုးခြားများနှင့်အလုပ်ကိစ္စ၊ အချစ်ကိစ္စများတွင် ဆက်နွယ်နေမည် …။ ကာလအတန်ကြာ မပြတ်မသားဖြစ်နေသော အချစ်ရေးကိစ္စတစ်ခုအား ပြတ်သား စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည် …။ ချစ်သူ၏ခြေလှမ်းမှားမှုများ၊ဆက်ဆံမှုစိမ်းကားခြင်းများအပေါ်ရင်နင့်စွာ ခံစားရကိန်းရှိသည် …။ ချစ်သူမှ အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်အပေါ်
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း…
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း… ဒီလအတွင်းမှာ သင့်အတွက် ကံဇာတာကတော့ မိသားစု အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးတွေ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် …။ အိုးအိမ်ကိစ္စ ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ တွေမှာလည်း ထူးထူးခြားခြား တိုးတက် အောင်မြင်ခြင်း မိသားစု ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝ အောင်မြင်မှုရရှိပါမယ် …။ အလုပ်အကိုင်နှင့်
တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း…
တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် (၆)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း… ဘ၀တစ်ခုလုံး အတွက် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများ ကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ အမှန်ဘက်ကနေ စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊ အမှုအချုပ် ၊ထောင်ဂတ်များနှင့် ပက်သက်ရခြင်း၊ အနားဝန်းကျင်တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ်ကြုံ ရတတ်ခြင်း၊ သူများပြဿနာကြားဝင် ခေါင်းခံ ဖြေရှင်းပေးရခြင်းတို့ ကြုံရ လတ္တံ့ …။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ အပြောင်းအလဲများ
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် (၆) လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း…
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် (၆) လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း… ၂၀၂၀-ခု ၊(၆)ပိုင်း အတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းများကို နေ့နာမ်အလိုက်တင်းပေးသွားပါမယ် …။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝ အောင်မြင်မည့် အချိန် ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင်တော့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံနိုင်တာပေါ့ …။ ခြံကိစ္စ ၊
နာမည်မှာ ”K”A”N”P”S” ပါခဲ့သော်
နာမည်မှာ ”K”A”N”P”S” ပါခဲ့သော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+ (နာမည်မှာ ”K”A”N”P”S” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျှုိ့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ (အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး) သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ် (ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့) နောက် နာမည်မှာ ”K”A”N”P”S” ပါနဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်က..၊ ခလေးဆန်လွန်းတဲ့အပြုအမူလေးကြောင့် ချစ်မိသွားမယ်
ဇွန်လ (10) ရက်မှ (16) ရက် အထိ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ မန်ဒါလာ စက်ဝိုင်း ဗေဒင် နဲ့ကိုယ့်​ကံကြမ္မာကိုယ်​က်ိုဆန်းစစ်နည်း …
သင်​တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မန်ဒါလာစက်ဝိုင်းများကို နံပါတ်စဉ်အလိုက်ရဲ့ ကံကောင်းခြင်း ညံ့ခြင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အဖြေများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… 1 အိုးသစ်၊ အိမ်သစ်၊နေရာ ဌာနသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပြီး ရာထူးတိုး တတ်သည် အကောင်းဆုံးသော အရာ များကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် ရလာစေနိုင်သည်။ လူမျိုးခြား နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ ဆုံရတတ်ပြီး အခွင့်ရေးကောင်းများ ရလာ မည်